AutoS Sleep, tonga lafatra tsotra izao hanaraha-maso ny torimaso | Vaovao IPhone
AutoSleep, tonga lafatra tsotra izao hanaraha-maso ny torimasonao
Ny fanaraha-maso ny torimaso dia zavatra mahaliana ny mpampiasa azo ampitaina amin'ny ankapobeny, ary izy io dia iray amin'ireo fiasa izay ampidirin'ny maro amin'ireo fehin-tànana miisa. Ny Apple Watch dia tsy tonga toy ny mahazatra amin'ireo asany, saingy manana ny sensor rehetra ilaina izy mba hahafahany manao azy farafaharatsiny ary koa ny bracelet hafa eny an-tsena izay mampiditra azy, ary misaotra ny App Store isika dia afaka mahita maro fampiharana izay manao an'io asa io.
Anisan'izy rehetra, ary aorian'ny fanandramana repertoire tsara, tena aleoko ny AutoS Sleep, rindranasa iray izay manome fampahalalana marobe momba ny nofinao ary koa manao izany amin'ny fomba tsotra izay tonga lafatra fotsiny ho an'ity asa ity ary tiako hofakafakaina lalindalina ireo toetra ananany izay mampiavaka azy amin'ny ambiny.
1 Tsy mila manao zavatra manokana ianao
2 Data tena marina sy feno
3 Fametrahana tsotra sy tsotra be
Tsy mila manao zavatra manokana ianao
Io no fomba tsara indrindra hamintinana izay ataon'ny AutoSleep. Ao amin'ny pikantsarin'ny lohateny dia azonao atao ny mahita ny habetsaky ny fampahalalana atolotray anao amin'ity rindrambaiko ity, amin'ny alàlan'ny fampiasana ny sensor tsy ny an'ny Apple Watch ihany, fa ny iPhone-nao. Eny, angonina daholo izany fampahalalana izany nefa tsy manao zavatra manokana, na farafaharatsiny tsy hitanao akory. Tsy mila milaza an'io ianao rehefa hatory, tsy mila ajanona eo am-pandrianao ny iPhone rehefa matory ianao, tsy mila manindry bokotra na zavatra hafa toa izany: Hofaritana ho azy avy hatrany ny AutoS Sleep rehefa hatory ianao, na dia ilay torimaso kely omenao aza rehefa avy nihinana tamin'ny folak'andro teo amin'ny fandriana tao an-trano ianao. Tahaka izany? Mampiasa algorithma tsotra nefa tena mahomby.
Manambatra ny fampahalalana avy amin'ny iPhone sy ny an'ny Apple Watch ny AutoSleep mba hamintinana fa efa natory ianao. Ho fanampin'izay, azonao atao ny manondro ireo torolalana mahazatra anao hanamorana ny asa. Satria mitafy ny tananao Apple Watch ianao rehefa mahatsikaritra fa nilatsaka ny tahan'ny fonao, zara raha mihetsika ianao ary tsy mampiasa ny iPhone-nao koa dia manadino fa matory ianao. Rehefa manomboka mihetsika ianao amin'ny maraina dia mieritreritra fa nifoha ianao. Mora tokoa nefa mahomby.
Data tena marina sy feno
Rehefa mamaky an'ity vao nolazaiko anao ity ianao dia misalasala avy hatrany ny amin'ny maha-marina an'io data io. Fa rehefa manandrana azy mandritra ny andro vitsivitsy ianao dia mahita fa mamaritra ny fotoana andehanao hatory sy rehefa mifoha ianao, na ny fantsika aza dia maharitra ny faharetan'ny torimaso kely azonao andriana amin'ny fandriana, avy eo mifarana ny fisalasalana.
Ny vaovao atolotray dia mizara ho takelaka samihafa: Clock, miaraka amin'ny fahitana manerantany ny andronao sy izay natorianao; Kalitao, miaraka amin'ny sary sy isan-jato izay mampahafantatra anao ny kalitaon'ny torimasoo; Andro, miaraka amin'ny angon-drakitra marimarina kokoa momba ny fitepon'ny fony, ny fivezivezena, sns. Ary ny tsara indrindra dia ny manao izany amin'ny fampahalalana izay angonin'ny Apple Watch irery, tsy mila mametraka apetraka amin'ny famataranandro., izay misoroka ihany koa ny fanjifana bateria be loatra. Ny fampiharana ho an'ny Apple Watch dia tsy voatery ary mampahalala fotsiny, raha ny marina dia tsy nametraka azy aho.
Fametrahana tsotra sy tsotra be
Izy io dia iray amin'ireo hevi-dehibe amin'ny fampiharana, tsotra be ny fikirakirany. Raha nanandrana fampiharana mitovy amin'izany ianao, dia mety ho tsapanao fa henjana loatra ny angon-drakitra angatahiny, tsy manitsy ny fahazarana isan'andro, na sarotra loatra, nefa tsy azonao tsara izay tena tian'izy ireo ho fantatra. AutoS sare dia manana mpanampy fikirakira izay amina dingana vitsivitsy nanazava tsara dia hanampy ny fampiharana hahafantatra tsara ny fahazaranao ianao ary mety ho marina kokoa ianao amin'ny refy.
Ny fampiharana aza mamela anao hanara-maso ny torimasonao nefa tsy mitondra ny Apple Watch, na dia mazava ho azy aza fa tsy dia marina loatra ny angona angonina amin'ity fomba ity. Ahoana ny fomba fatoriana amin'ny famantaranandro ary maharitra mandritra ny tontolo andro ny bateria? Ny tsara indrindra dia ny manova ny fahazarana isan'andro, manafatra famantaranandro alohan'ny hatory ary vao avy mifoha rehefa miomana handeha hiasa., ary mba hahafahanao mitafy azy tsy misy olana mandritra ny alina rehefa matory ianao. Amin'ireto fiampangana kely roa ireto isan'andro dia hanana fahaleovan-tena ampy ianao hahafahana mampiasa ny famantaranandro amin'ny alina.
Matory Auto. Araho maso ny torimasonao€ 4,49
Ny fampiharana dia tsy maimaim-poana, ary na dia marina aza fa misy repertoire tsara momba ny fampiharana maimaim-poana izay heverina fa manome izany, Raha manandrana ianao, ambonin'izany rehetra izany, dia ho resy lahatra amin'ny fahamoran'ny fampiasana azy sy ny hamafin'ny fandrefesana azy ianao. Ho fanampin'izay, manavao hatrany azy amin'ny fanatsarana hatrany ny mpamorona azy, noho izany ny fanohanana dia mihoatra ny marina. Ilaina ny mandoa ny € 2,99 vidiny.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » AutoSleep, tonga lafatra tsotra izao hanaraha-maso ny torimasonao
Ny mpanjaka dia nitondra ahy ity maodely ity ary tena faly aho amin'izany afa-tsy amin'ny antsipiriany iray ihany:
Tsy afaka nampifangaro azy io tamin'ny fitaovana Bluetooth aho, ao anatin'izany ny Beats.
Efa nanana izany olana izany ianao. Nifandray tamin'ny fanohanana ara-teknika an'ny Apple aho ary ny hany zavatra nolazain'izy ireo tamiko dia ny famantaranandro dia fitaovana marefo indrindra miaraka amin'ny fifandraisana Bluetooth ary mety tsy mandeha amin'ny headphone avy amin'ny marika hafa
Ahoana ny fomba handikana sy hamaritana ireo teny amin'ny iOS tsy misy fampiharana an'ny antoko fahatelo
Misafidiana rehefa mila miasa ny Power Mode ianao amin'ny iPhone (Tweak)